Tsvaga Faedo de Ciñera, sango rakanaka rebeech | Kufamba Nhau
El Faedo de Ciñera ndiro zita rakapihwa sango rakanaka rebeech iri munharaunda yeLeón, pakati pemataundi eVillar del Puerto neCiñera de Gordón. Iri sango rinosanganisirwa munzvimbo yakachengetedzwa yeAlto Bernesga Biosphere Reserve. Makore mashoma apfuura iyo Ministry of Environment yakapa iyo mubairo wesango rakachengetedzwa zvakanakisa muSpain, iyo inotipa pfungwa yehupfumi hwayo uye runako rwechisikigo.
Diki kuenda kunzvimbo dzinoyevedza senge Faedo de Ciñera Zvinotidzidzisa kuti nzendo hadzifanirwe kungotarisa pakutsvaga maguta makuru kana nzvimbo dzakakurumbira, asi zvakare kutsvaga pakati penzvimbo diki. Iri sango rinotipa yakanaka kupera kwevhiki nemugwagwa wekukwira munzvimbo yakasikwa.
1 Matipi ekuona Faedo de Ciñera
2 Kukwidza nzira
3 Nguva yekushanyira Faedo de Ciñera
Matipi ekuona Faedo de Ciñera
Iyi nzvimbo ye sango rine nzira dzekukwira makomo kuti hadzina kutambanuka zvakanyanya uye hadzisanganisiri zvakanyanya. Ndosaka iwe usingafanire kuita gadziriro yakawandisa. Ngazvive sezvazviri, kana tichienda kune dzimwe nzira zvinogara zvichikurudzirwa kutakura bhegi rine chimwe chikafu nemvura, kunyanya kana tichienda nevana. Uye zvakare, isu tinogona kutakura bhegi kuti tirege kusiya chero chinhu kana marara munzvimbo. Zvakakosha kupfeka mbatya dzakakodzera pakufamba. Tinofanira kurangarira kuti kunyangwe tikaenda mune yakanaka mamiriro ekunze munzvimbo dzakasvibira dzesango nyoro senge idzi dzinogona kutonhora zvishoma. Saka zvinogara zvakanaka kuti uuye nechimwe chinhu chinodziya kuitira kana zvadaro. Bhutsu dzakadzikama nekubata kwakanaka kwakakosha, nekuti masango aya nenzvimbo dzawo dzine hunyoro anogona kuva nenzvimbo dzinosvika zvakanyanya kana kwaunogona kutsvedza. Kugara tichiremekedza nharaunda uye tichifunga mamiriro ekunze nemaawa echiedza, isu tichafanira chete kuzvigadzirira kuti tinakirwe nerakasarudzika chiitiko. Kana tikauya nechikafu tinotogona kuva nepikiniki yakanaka munzvimbo ine matafura padyo nesango.
Kana izvo zvaunoda kuita nzira yekukwira nzira kuburikidza neFaedo de Ciñera, une dzimwe nzira. Iyi migwagwa inotangira mutaundi reCiñera de Gordón, guta riri makiromita angangoita makumi mana kubva kuLeón. Kubva pano nzira dzinogona kuve diki, dzakati wandei emakiromita kana makuru, e anosvika kumakiromita gumi nerimwe, zvichienderana nezvatinoda kuita. Iyo nzira refu ndiyo inoshandiswa nevashandi vepaVillar del Puerto kuwana migodhi yeCiñera. Pakutanga, iwe unogona kusvika nyore nzvimbo ine matafura nemabhenji inova nzvimbo yepikiniki kwaunogona kumira kuti udye. Iwe unopfuura nemunharaunda ino munzira yekudzoka, saka kune vakawanda vanochengetera chikafu kana nzira yapera.
Kana tikaramba tichifamba nenzira, tinopfuurira nemumafuro uye kana tichipfuura zambuko nedzimwe nzvimbo dzine mvura tinosvika kusango rebeech, inova imwe yenzvimbo dzakanakisa kwazvo. Nzira diki-diki inogumira pano, kunyangwe tikanzwa sekuda kwedu tinogona kuramba tichiongorora nzvimbo nekuti nzira yacho inoenderera. Zvakare, gare gare isu tichakwanisa kuona zvimwe zvinonakidza zvinhu musango. Imwe yacho ndeye Arroyo del Villar iyo inodarika sango uye inozadza zvese nekutinhira kwemvura zvinova zvemashiripiti. Iwe unofanirwa kungwarira nenzvimbo nyoro kudzivirira njodzi. Kune zvakare nzvimbo isingasvikike uye ine matombo kwaunofanirwa kungwarira asi chikamu chesango ichi chakanaka uye chakakodzera kuita nzira yese. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuona iyo yekare beech musango iyo inoonekwawo seimwe yevakuru muSpain yese. Iyi beech yakatumidzwa zita kuti Fagus uye inofungidzirwa kunge ingangoita makore mazana mashanu ekuberekwa.
Nguva yekushanyira Faedo de Ciñera
Iri sango rebeech rinotipa shanduko inoshanduka gore rese. Kunyangwe zhizha iri nguva yakanaka nekuda kwemamiriro ekunze akanaka ayo anotibvumidza isu kuva nepikiniki, pane dzimwe nguva apo inogona zvakare kuve inonakidza. Mumatsutso inguva iyo izvi beech sango rinotanga kuisa pane rakanakisa kumeso uye kana paine vashanyi vakawanda kuti vawane runako rwenzvimbo ino. Mavara anogona kuoneka mumiti iyi mumatsutso anoita kuti nzvimbo iyi iite senge nzvimbo yengano, nzvimbo yemashiripiti iyo inotipawo nguva yakanaka yekuita nzira dzekufamba musango. Zvirinani kudzivirira kushanya munguva yechando nekuti inogona kunaya uye iine mwando yakawanda uye isingawanikwe, kuwedzera kuchando. Ndokusaka nguva dzakanakisa dziri chirimo, apo masango ari mukubwinya kwawo kwese, kana matsutso, paanenge aine mavara akasarudzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Faedo kubva kuCiñera
Kufamba kuburikidza neLatin Quarter, muParis